ओम सर्जिकल स्वास्थ्य सामाग्री दिन असक्षम, धरौटी जफत किन नगर्ने ? — onlinedabali.com
ओम सर्जिकल स्वास्थ्य सामाग्री दिन असक्षम, धरौटी जफत किन नगर्ने ?
काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी स्वास्थ्य सामाग्री निर्धारित मितिमा दिन फेरि पनि निजि कम्पनी असक्ष भएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत दोस्रो पटक गरेको सम्झौताको समय सीमाभित्र स्वास्थ्य सामाग्री दिन दुईटा कम्पनी असक्षम भएका हुन् ।
ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता विवादित बनेपछि विभागले रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोहीअनुसार बैशाख ५ गते ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालि, हाम्रो मेडिकल कन्सर्न प्रालि र लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेको थियो । विभागले करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामान खरिदको लागि सम्झौता गरेको थियो ।
तीनवटा कम्पनीमध्ये आइतबारसम्म लुम्बिनीले मात्रै सम्झौताअनुसारको सामान दिन सक्षम भएको विभाग स्रोतले बताएको छ । निर्धारित समयमा सामान दिन नसकेपछि ओम सर्जिकल र हाम्रो मेडिकलले समय थपको लागि निबेदन दिएका छन् । विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलका पत्र आएको पुष्टि गर्दै सयम थप हुने वा नहुने कुनै निर्णय नभएको बताए ।
विभाग स्रोतका अनुसार लुम्बिनीले पनि समय थपका लागि निवेदन दिएको थियो तर आइतबार सामान बुझाएको छ । एउटै मितिमा सम्झौता गरेको कम्पनीमध्ये एउटाले सामान दिन नसक्ने अरुले दिन नसक्ने कुरालाई परिस्थितिजन्य मान्न नसकिन विभागका एक कर्मचारीले बताए । ओम सर्जिकल र हाम्रो मेडिकलले चीनबाट ल्याएको सामान बजारमा बेचेको भन्ने ओरोपलाई यसले पुष्टि गर्छ ।
आइतबार साँझ ओम सर्जिकलका संचालक रामशरण भण्डारीले अनलाइन डबलीसँग कुरा गर्दै परिस्थिति काबु बाहिरको भएकोले सामान समयमै दिन नसकिएको बताए । भण्डारीले अनलाइन डबलीले सामान दिन नसकेको भनेर आफ्नो बदनाम गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने धम्की समेत दिए । अनलाइन डबलीले निर्धारित समयमा स्वास्थ्य सामाग्री दिन नसकेको समाचार पहिलो पटक प्रकाशित गरेको थियो ।
तर लुम्बिनिले सामान दिएसँगै भण्डारीको दाबी सहि नभएको पुष्टि भइसकेको छ । एउटै मिति सम्झौता गरेकामध्ये एउटा कम्‍पनीलाई परिस्थिति काबु भित्र हुने र दुईटालाई बाहिर हुने भन्‍ने मान्‍न नसकिने विभागका एक अधिकारीले बताए । समय सीमा पार हुँदा पनि सामान नदिनु भनेको असक्षमता र गैरजिम्म‍ेवारीपन भएको बताउँदै उनले भने, “लुम्बिनीलाई चीनबाट सामान ल्याउन अनुकुल हुने र ओमलाई प्रतिकुल हुने कुरा भएन, उनीहरु असक्षम र गैरजिम्मेवार भएका हुन् । यसको सजाय भोग्नुपर्छ ।”
यदि समयमै सामान दिन नसक्ने भए सम्झौता किन गरियो भन्ने विषय पनि गम्भीर रुपमा उठेको छ । सरकारले दिएको समय सीमा भित्र सामान ल्याउन नसक्ने भन्दै अरु धेरै कम्पनीहरु सम्झौताको लागि तयार भएका थिएनन् । संकटको बेला सम्झौत गरेर सरकारलाई सामान नदिनु अपराधसँगै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलवाड भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
ओम सर्जिकलले तीन पटकसम्म सामान भित्र्याएको वाणिज्य विभाग स्रोतको दाबी छ । तीन पटकसम्म सामान ल्याएर पनि समयमै नदिने ओम सर्जिकलसँगको भएको सम्झौता रद्द गर्दै धरौटी जफत किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न विभागकै कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् ।
१.सम्झौताअनुसार चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामाग्री सरकारलाई दिइएन, बजारमा महंगोमा बेच्दै निजि कम्पनी
३. स्वास्थ्य सामाग्रीमा बदमासी-२ : डोटेल भन्छन्- विभागलाई नदिएर बिक्री गर्नु अपराध हो, कारवाही हुन्छ